सेक्स पश्चात निद्रा आउनु सहि या गलत ? जानौं... | Hamro Doctor News
सेक्स पश्चात निद्रा आउनु सहि या गलत ? जानौं...
सेक्स पश्चात तपाईंको पार्टनर सुत्नु सामान्य हो वा अन्य कारण त्यसको बारेमा प्रायले सोच्ने गर्दैनौं । के यो सामान्य हो वा कहिले काही सेक्सको थकान २४ घन्टा सम्म रहिरहन्छ ? कतिपय महिला यो प्रश्नको उत्तर खोजि नै रहन्छन् । सेक्स पश्चात सुत्नु राम्रो हो वा गलत ? जानौं...
प्रायःजसो मानिसहरु सेक्स रातिको समय गर्ने गर्छन् । त्यो समय सम्म मानिस थाकि सकेको हुन्छ । सेक्स पश्चात सुत्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । सेक्स रिल्याक्स गर्ने एक प्रक्रिया हो जस कारण यस्तो हुने गर्छ । त्यहि महिलाको शरीर पुरुषको ठिक विपरित प्रतिक्रिया दिन्छ । अर्गेज्मले उनलाई उत्तेजित बनाउँछ र उनलाई बढि माया गर्ने मन हुन थाल्छ ।
(मेन्ज हेल्थले गरेको अध्ययनमा आधारित)
Last modified on 2019-04-07 10:19:23